प्रचण्ड-विप्लव भेट, छुटलान त नेता-कार्यकर्ता ? – अभियान पोष्ट
प्रचण्ड-विप्लव भेट, छुटलान त नेता-कार्यकर्ता ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच भेट भएको छ । नेकपा महासचिव विप्लव प्रचण्डलाई भेट्न पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला कञ्चनसहित खुमलटार पुगेका हुन् ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि गत वर्ष २१ फागुनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने क्रममा विप्लवले आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइलगायत सहमति गरेका थिए ।
तर, लामो समय भए पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पछिल्लो समय नेकपाका नेताहरू सरकारसँग असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए । विप्लवसँग सहमति गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता बहिर्गमन भएको दोस्रो दिनै प्रचण्ड र विप्लवबीच भेट भएको हो ।